Dalka Soomaaliya iyo dadkiisa dowladnimo ma udarantahy??
Tan iyo burburkii Dowlada Kacanka Soomaaliya waxaa dalka soo marey marxalado kala duuwan kusaleysan lagdan siyaadeed oo soomaali dhexdeeda iyo dowladahada jaarka/dariska la ah soomaaliya. Marka laga reebo dagaalada soomaalida dhexdeeda, waxaa marwaliba dalka dagaalo kala duuwan kusoo gala dowlada Itoobiya(Ethiopia), laakiin marna uma cuntamin in sal military iyo siyaasadeed kuyeelato soomaaliya intii ay dowlad la’ann kajirtey dalka. Sanadihii dalka kala heesten hugaamiye kooxeedyada, Itoobiya iyo Kenya uma soo dhowaan jirin dalka. Mar alaale marka Itoobiya isku deydo in xoog kusoo gasho soomaaliya, sii wada jir ah ayaa hugaamiye kooxeedyada isugu caawin jiren waana dalka ka eryi jiren militariga Itoobiya.
Waxaa nasiib daro ah, maanta inagoo dowlada sharci ah haysano oo dowladaha caalamka xiriir diblomaasiyeed laleenahay ayaa dowlada Itoobiya (Eithiopia) qas siyaasadeed iyo awood military nagu wada. Waxaa kale taas inoo dheer dowlada Kenya ayaa sanadahan dambe kusoo biirtey qaska nalagu wado iyo in dhuulka iyo bada Soomaaliyeed muran geliso ayadoo sheganoyso awood military iyo siyaasiyin soomaali ah (Siyaasiyin Maamul Goboleedyo iyo Barnaamijka AMISOM) iyaga musuqmaasuqteen u ololeeynaayan danahooda sharci darada lamaagsan dalka Soomaaliya.
Soomaali badan oo muwaadimiin ah ayaa arintan kuhadasha ee faragelinta Itoobiya iyo Kenya kuhaayan dalka Soomaaliya. Siyaasi walba oo soomaali ah waxuu aad u dhaliila ama mucaarada faragelinta Itoobiya iyo Kenya kuhaayan dalka soomaaliya, laakiin siyaasigu marku xil kaqabto dalka- wuxuu saxiib dhow lanoqonaaya dowlada Itoobiya iyo kenya taas aan kumicneen karo in dhaliilka Itoobiya ay tahay wadada ama qaabka keliya siyaasada ama kursi looga doonto dalka Soomaaliya.
Waa yartahay muwaadinmin ama siyaasiyin Soomaali ah soo bandhigto xaalka dhibaatadan Itoobiya iyo kenya nagu heeso lagu xalin karo. Aniga Cabdi ahaan waxaan isweydiyey anoo fiirinaayo awooda militari iyo tan dhaqaale ee dowlada Soomaaliya haysato, Macquul matahay in dowlada soomaaliya kahor tagi karto labadan dal(Itoobiya iyo kenya) dhibaatada kuhaayan qaranimada iyo midnimada soomaliyeed?
Waxaa isoo baxdey in dowlada soomaaliya awood buuxda kufilan leedahay iney isku celiso labadan dal(Itoobiya iyo Kenya) iyado isticmaaleyso awood siyaasadeed/diblomaasiyeed. Fakar ahaan, qodobadan hoos ka xusan ayaa soo baxeen sida wanaagsan ayna kuhaboontahay in loogu hor tago dhibaatada labadan dal kuhaayan Soomaaliya. Waxaan usoo jeedinaya Madaxda dalka Soomaaliya iyo cid alaale cida daneyneyso arimaha Soomaaliya in qodobadan hoose sii ay wax uga qaban lahaayen mugdiga hor leh dalka soomaaliya sii gali rabo.
madaxda dalka waa in lacayaarta cayaarta siyaasadeed Kenya iyo Etoobiya ucayaarto
waa in jiljileeca siyaasadeed iska deysa ayna noqdan hogaamiye qaran oo go’aan adag qaata dhanka siyaasada dibada gaar ahaan tan Itoobiya iyo Kenya.
Waa in marnaba kabaqin culees kaga imaan karo labadan dowladood (Itoobiya iyo Kenya).
Waa in madaxda dowlada soomaaliya isku deyda ka dowlad ahaan in naftirkooda culees siyaasadeed iyo dhaqaale saari karto labadan dal sii ay culeeskooda dib ula noqon layhaayen.
Waa in dowlada Soomaaliya isku deysa in hitaa xiriirka diplomaasiyeed ujarto labadan dal ilaa iyo mar dambe ay go’aan uga gaari lahayen mustaqbalka xiriirkooda
Waa in ay xiyiraad kusoo rogaan shirkadahooda ganacsiyeed iyo hay’adahooda samafalka ee UNka lacag uga cunan magaca dalka iyo dadka soomaaliyeed.
Waa in barnaamijka AMISOM labadan dal (Itoobiya iyo Kenya) kaga hoolgalan dalka soomaaliya gabi ahaanba iska diidan ona militarigooda kaga baxan dalka soomaaliya sii Ciidanka Xooga dalka soomaaliya awood uyeesho.
Waa in Dhaqaalaha Kenya iyo Itoobiya barnaamijka AMISOM kuqaatan lageliya dib habeynta, qalabeynta iyo mushaaradka ciidan dalka.
Waan hubaa haddii qodobadan dhamaantood ama qaar kamid ah lagu ansixiyo ama laga fuliyo dalka in arintu wax iska badali doonto ee Itoobiya iyo Kenya galkooda kunoqonaayan, In’Shaa’Allah.
Qore: Abdi M. Mohamud~~ Abdi Muda
The New Face of Somalia:
Three Generations Political Agents’ History Does Repeat and Prove Itself in Somalia.